မင်းကိုနိုင်၊ ကျောင်းသားအရေးနဲ့ အော်စလို ဆွေးနွေးဝိုင်း | ဧရာဝတီ
ထက်အောင်ကျော်| February 21, 2013 | Hits:12,429
7 | | အော်စလိုတက္ကသိုလ်ဟာ နော်ဝေမှာ ရှေးအကျဆုံးနဲ့ ဥရောပမြောက်ပိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်တခု
နောက်တခါ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ခဏခဏလုပ်နေပေမဲ့ တခါမှ ကောင်းကောင်း အောင်မြင်မှု မရသေးတာဟာ ပြည်သူတွေမပါသေးတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ “အခုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါလား၊ ဟိုဖက်က ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒီဖက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေ ထိပ်သီးအချင်းချင်း ပြောနေကြတာလေ။ ပြည်သူလူထုမပါသေးဘူး” လို့ မင်းကိုနိုင်က ထောက်ပြပါတယ်။
လွတ်လပ်သော အမျိုးသား ပညာရေးဆီသို့ ခရီးကြမ်း
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website CommentွှTheingi Tun February 21, 2013 - 5:55 pm	ကိုမင်းကိုနိုင်ဖြေသွားတာတွေအရမ်းကောင်းပါတယ်။သူပြောသလိုပါပဲမြန်မာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်နဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေသင်ယူဖို့လိုနေပါပြီ။ဘယ်သူက ကလို့၊ဘယ်သူကတီးနေတယ်ဆိုတာတော့သမိုင်းကပြောသွားပါလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
Reply	Swe htwe February 21, 2013 - 10:47 pm	That’s right.
Reply	aung myo shein February 22, 2013 - 10:36 am	အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးမို့share ထားပါတယ်၊နောင်လဲအခုလိုဆောင်းပါးကောင်းတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ
Reply	မောင်မှန် February 22, 2013 - 4:27 pm	မင်းကိုနှိုင်ပြောတာ မှန်သင့်သလောက်တော့မှန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့ မင်းကိုနိုင်သွားတဲ့ခရီးနဲ့ သမ္မတသွားတဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ အများကြီးကွာပါတယ်။ သမ္မတက သံတမန်ရေးအရ တရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရလို့သွားတာ။ မင်းကိုနိုင်က သူတို့အဖွဲ့ကို အပြင်ကလူတွေ ထောက်ခံမှုရဖို့ သွားတာ။
အခုအချိန်မှာ အစိုးရတီးကွက်မှာဘဲ လိုက်ကရမှာပေါ့။ မင်းတို့တီးပိုင်ခွင့်မှ မရှိသေးတာ။ တီးပိုင်ခွင့်ရချင်ရင်တော့ မင်းတို့တွေထဲမှာ အရည်အချင်းပြည့်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။ ပြန်တွက်ကြည့်ကြပါ။ no? တဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ယူမှရမယ်။
အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်တယ်။ လူအများအကြိုက်လိုက်ပြောရတာလွယ်ပါတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ရယ်၊ ဝေဖန်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကြီးများရယ်——–